TCDD YHT si aad u Iirto Mashiinka Qalabka | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraQalabka TCDD ee loo yaqaan 'TCDD YHT Machinist to Buy.'
07 / 11 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, Shaqooyinka, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
TCDD YHT wuxuu shaqaaleysiin doonaa Machinist - TCDD waxay sameyn doontaa Xilliga Shaqaaleynta 262: jagooyinka shaqaalaha TCDD waa la furay waxaana loo qeybiyay qeybinta shaqaalaha 5.Nov.2019. Go'aanka lagu daabacay Shaqada Rasmiga ah ee Gazette State Railways 262 shaqaalaha ayaa lagu soo daray.
Go'aanka lagu soo daabacay arrinta rasmiga ah ee Gazette rasmiga ah waa sida soo socota; Marka laga hadlayo shirkadaha ganacsiga ee dowladu leedahay iyo kuwa kaabayaasha ah, macaamil ganacsiyeedyada aan kor ku soo sheegnay waxaa lagu fuliyaa baaxadda Sharciga Qaanuunka No. 399.
Go'aanka Madaxweynaha, baajinta iyo wax ka beddelka jagooyinka shaqaalaha in la shaqaaleeyo iyo jagooyinka shaqaalaha heshiiska la galay iyo jagooyinka iyo xilalka ay abuureen Shaqaalaha Rayidka ee hoos yimaad Sharciga 657 ee no.
SHAQAALAHA GAADIIDKA TCDD
Ogeysiiska lagu daabacay, TCDD, Bartamaha iyo Gobolka, madaxa takhasuska, kormeeraha, lataliyaha, sarkaalka, maareeyaha adeegga, maamulaha, khabiir ku xeel dheer, farsamooyinka Wagon, madaxa farsamada, YHT Mechanic iyo shaqaalaha cilmu-nafsiga.
Shaxda Ballamada Shaqaalaha TCDD
TCDD xarunta Chief Expert 28
TCDD xarunta kormeere 1
TCDD xarunta lataliyaha 10
TCDD xarunta sarkaal 26
TCDD gobolka Maareeyaha Adeegga 3
TCDD gobolka agaasimaha 15
TCDD gobolka Chief Expert 19
TCDD gobolka Tababaraha Wagon 120
TCDD gobolka farsamo yaqaan Chief 18
TCDD gobolka Injineerka YHT 20
TCDD gobolka nafsiga 2
WAA MAXAY SHARAXADU?
Aasaasida macnaheedu waa kala goynta shaqaalaha. Shaqaalaha la qoondeeyay ayaa la shaqaalaysiin doonaa. Macluumaadka ku saabsan qorista cusub iyo ballamaha gudaha lama cayimin go aanka ayaana la dhaqan galiyay.
Marka lagu dhawaaqo Go'aanka Madaxweynaha 2019 / 373 ee lagu daabacay wargeyska rasmiga ah Riix halkan
Waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabno su'aasha ah darawalka iyo sida loo noqdo darawal. Darawalku waa darawal fiilada korontada, naaftada ama qashinka tareenka ee wata rakaabka ama xamuulka.
Waxay xaddidaa qaybaha farsamada ee wadada tareenka waxayna qaadataa talaabooyinka amniga ee lagama maarmaanka ah, - Waxay ku shaqeysaa isgaarsiinta waxayna raacdaa amarrada dhaqdhaqaaqa, canshuuraha, calaamadaha ay bixinayaan tilmaameha iyo shaqaalaha kale ee tareenka waxayna xukumaan dhaqdhaqaaqa tareenka - Dayactirka yar iyo tunjinta inta lagu jiro safarka. - Wuxuu hayaa warbixin markay safarka dhammeeyaan ka dib oo buuxiyo buugaagta la xiriira (buugga dhacdooyinka, iwm.).
ARAABAHA IYO MATERIALS USED
Gawaarida (Steam, Diesel, Korantada, Diesel-Electric), - Raadiyo, - Moodooyinka Dhaqdhaqaaqa, - Farshaxankayaasha, makiinadaha wax lagu duubo, qalabka wrench, aaladaha kala duwan, - Buugga Dhacdooyinka (buugga halka ay dhibaatooyinku ka yimaadaan).
Kuwa doonaya inay makaanik yihiin; - U adeegsan kara indhaha iyo lugaha isuduwidda, - Si dhakhso leh ayey uga falcelin karaan kicinta, - Waxyaalo badan dareemi karaan waqti go'an, - taxaddar, mas'uul, dhiig qabow, - Kala sooci karaan midabbo, - Rabitaanka caafimaadka maskaxda, - Farxadda la tacaalida mashiinnada iyo kuwa leh awoodo farsamo.
MEELAHA SHAQO IYO SHURUUDAHA
Maadaama farsamoyaqaanadu ka shaqeeyaan aagga gaadiidka tareenka, waa inay ku safraan wakhti kasta. Mihnaduhu waa inay ahaadaan maalin iyo habeen shaqo, maalmaha fasaxa ah ama inta lagu jiro fasaxyada, oo si joogta ah u fadhiisanaya oo hogaaminaya farsamada. Marar dhif ah, waxay ku lug yeelan karaan shilalka tareenka. Waxay la xiriiraan qofka u diraayo, madaxa tareenka, qofka isbeddelaya iyo kan caanka ah.
HESHIISKA SHAQADA IYO QOYSASKA
Xirfadlayaashu waxay badi ahaan ka shaqeyn karaan Dawladda Hoose ee Turkiga iyo warshadaha sonkorta, warshadaha birta iyo birta, nidaamka gaadiidka rakaabka ee magaalada hoose. Tirada dadka sii kordheysa waxay keenaysaa dhibaatada gaadiidka dadweynaha. Mid ka mid ah habka ugu dhaqaalaha badan ee amniga ah ee gaadiidka dadweynaha waa tareenka. Looma sheegi karo in gaadiidka xamuulka iyo tareenka ee tareenka ee waddankeena uu yahay heerkii la rabay. Maadaama gaadiidka tareenka uu aad muhiim ugu yahay horumarinta dal, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo weeraro muhiim ah oo ku wajahan waddankeenna. Horumarinta iyo casriyeynta tareenada ayaa sidoo kale macnaheedu yahay shaqada badan ee machinistada.
MEESHA WAXBARASHADA XIRFADEED
Tababbarka farsamada waxaa lagu bixiyaa xarumo tababar gudaha-ka ah oo xiriir la leh Agaasinka Guud ee Tareenka Waddanka Turkiga. Intaa waxa u dheer, ardayda ka qalin jabisay dugsiyada sare ee xirfadaha xirfadaha waxaa lagu tababbaray tababar shaqo.
HORDHAC WAXBARASHADA XIRFADEED
Ugu yaraan ardayda ka qalin-jabisa dugsiga hoose ayaa looga baahan yahay waxbarasho xirfadeed. - Intaa waxaa sii dheer, waxaa lagama maarmaan ah in laga helo warbixin guddi dhawaaqeed ah isbitaalada TCDD.
GUDBIGA IYO TALOOYINKA WAXBARASHADA
Tababarka Xirfadlaha Xirfadaha ee Agaasimaha Guud ee Wadooyinka Tareenka ee Turkiga; 18 bishii loogu talagalay qalinjebinta Xirfadlayaasha Dugsiyada Sare ee TCDD, Sannadka 3 ee ardayda qalin-jabisa ee xirfad-tacliineed ee dugsiyada sare. Ardayda dhigata dugsiyada sare ee xirfad-xirfadeedka, TCDD Agaasimaha Guud ee ay furan yihiin imtixaanka qalabka farsamada iyo kuwa ku guuleysta, tababarka iyo adeegyadda ka qeybgalaya waxay fursad u leeyihiin inay noqdaan makaanik. Tani, shaqada 3 ee bilowga shaqada, iyo sidoo kale kaaliye tababaraha injineeriga ilaa shaqeynaya liisanka. Dhamaadka tababarka, shatiga darawalnimada waxaa la siiyaa kuwa ku guuleysta imtixaanka.
Qalinjabiyeyaal cusub oo qalin-jabiyey Dugsiga Sare ee TCDD iyo kuwa ka qalin-jabiyay Dugsiga Sare ee Xirfadaha Shaqada, kuwaas oo si cad u qiray imtixaan, waxay bilaabeen waajibaadkooda inay noqdaan caawiye meherad. Ka dib markii muddo cayiman oo tababar ah, waxay helayaan darawalka. Kuwa hela dibloome ahaan makaanikada waxay noqon kartaa makaani-maareeye ahaan iyagoo raacaya koorsooyinkooda.
SHARCIYADA, DEMBIYADA IYO WAXYAABAHA
Inta lagu jiro tababbarka adeegga ee ay abaabuleen Agaasimaha Guud ee Turkiga Railways (TCDD), mushaarka bil kasta ee heerka iyo heerka uu dhigayo Sharciga Shaqaalaha Rayidka No. 657 waxaa loo fidiyaa ardayda qalinjebisay dugsiyada sare. Ballanqaadka qofka loo shaqeeyo inuu yahay xirfadle waxaa lagu sameeyaa qaab shaqaale joogto ah ama qandaraasle ah, kuwaas oo loo magacaabay shaqaale joogta ah ayaa mushahar bil walba ah ku qaataan xaddiyada 2 mushaharka ugu yar ee la siiyo magdhawga khaaska ah. Shaqaalaha qandaraaska la siiyaa mushahar bil kasta ah oo ka bilaabma 4 ilaa 5 waqtiyada mushaharka ugu yar.
Gaadiidka TCDD wuxuu sameyn doonaa soo dhawaynta 73 Machiniste!
Ogaysiiska Qeybta Shaqaalaha ee TCDD
Gawaarida 'TCDD Naafonimada', Dambiilayaashii Hore iyo Shaqaalaha…
YHT ayaa ka badbaaday mishiinka mishiinka dhaawacmay markii ugu horeysay
Shilka tareenka ee Khadka YakT ee Bilecik, Mashiinka 2…
TCDD Machinist iyo shredders waxay doonayaan inay xiraan
TCDD wuxuu furan yahay koorso si loo tababaro farsamada
Ogeysiis Qandaraasle: DE 24000 Nooca Xirfadlaha Ganacsiga i
Ogeysiiska Udhanka: Shaqaalaha makaanikada ee 4 ee Gacanka ku sugan
Ogaysiiska Ugaarsiga: Shaqaalaha Mashiinka Mashiinka 4 ee Gacanka Dhexdiisa
Ogeysiiska Qaadashada: DE 24000 nooca farsamada y